အဆိုပါဂျက်အင်ဂျင်တီထွင်ဘယ်သူက - ထိုဂျက်အင်ဂျင်၏သမိုင်း?
အဆိုပါဂျက်လေယာဉ်အင်ဂျင်များ၏တီထွင်မှုကိုပြန် 150 ဘီစီန်းကျင်ကိုဖန်ဆင်းသော aeolipile မှခြေရာခံနိုင်ပါတယ်ပေမယ့်ကျနော်တို့တောင်, ယနေ့သိအဖြစ်ဒေါက်တာပညာရှင် Hans ဗွန် Ohain နှင့်ဆာဖရန့် Whittle နှစ်ဦးစလုံးဟာဂျက်အင်ဂျင်၏ Co-တီထွင်သူအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုကြသည် တစ်ခုချင်းစီကိုသီးခြားစီအလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့်ရဲ့အခြားအလုပ်၏ဘာမျှမသိတယ်သော်လည်း။
Jet Propulsion ဓာတ်ငွေ့သို့မဟုတ်အရည်တစ်ဦးက high-speed ကိုဂျက်လေယာဉ်၏နောက်သို့ဆုတ်ထွတ်နေဖြင့်ရိုးရှင်းစွာဆိုရှေ့ဆက်လှုပ်ရှားမှုအကြောင်းတရားများအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
von Ohain ၏ဒီဇိုင်နာစဉ်းစားသည် ပထမဦးဆုံးလုပ်ငန်းလည်ပတ် turbojet အင်ဂျင် Whittle ဗွန် Ohain 1936 ၌သူ၏ turbojet အင်ဂျင်များအတွက်မူပိုင်ခွင့်ပြုခဲ့ပေမဲ့ 1930. အတွက် turbojet အင်ဂျင်များအတွက်မူပိုင်ခွင့်မှတ်ပုံပထမဦးဆုံးခဲ့စဉ်ကဖြစ်ကြောင်းဗွန် Ohain ရဲ့ဂျက်လေယာဉ်ကြီး 1939 Whittle ရဲ့ဂျက်လေယာဉ်ထဲမှာပျံသန်းဖို့ပထမဦးဆုံး 1941 ခုနှစ်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အချွတ်။
သို့သျောလညျးအနေဖြင့်ဗွန် Ohain နှင့် Whittle ခေတ်မီဂျက်အင်ဂျင်၏ဘိုးဘေးတို့ဖြစ်နိုင်သည်ဒါရှေးခတျေကတညျးကဂျက်တွန်းအားများစွာတိုးတက်မှုရှိပါပြီ, များစွာသော "အဘိုး" ကျနော်တို့ယနေ့ overhead မြင်ဂျက်အင်ဂျင်များအတွက်လမ်းကိုသူတို့ရှေ့မှာလာ၏။
အစောပိုင်း Jet Propulsion Concepts
150 ဘီစီ၏ aeolipile တစ်သိချင်စိတ်အဖြစ်ဖန်တီးနှင့်မည်သည့်လက်တွေ့ကျတဲ့စက်မှုရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုဘယ်တော့မှခဲ့သည်။ တကယ်တော့သူကဂျက်တွန်းအားတစ်ခုလက်တွေ့ကျသောအသုံးပြုမှုပထမဦးဆုံးအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ကွောငျးတရုတ်အနုပညာရှင်များက 13 ရာစုအတွက်မီးရှူးမီးပန်းများဒုံးပျံများ၏တီထွင်မှုသည်အထိဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
1633 ခုနှစ်, အော်တိုမန် Lagari Hasan Çelebiအောင်မြင်တဲ့ဆင်းသက်ဖို့ငုပ်လေထုနှင့်အတောင်ပံအစုတခုသို့တက်ပျံသန်းဖို့ Jet Propulsion စွမ်းအားဖြင့်တစ်ဦးတခုကိုဒုံးပျံကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒီအားထုတ်မှုများအတွက်, သူအော်တိုမန်ကြည်းတပ်အတွက်အနေအထားနှင့်အတူခံရတယ်။ ကျောက်ဆောင်ယေဘုယျလေကြောင်းများအတွက်အနိမ့်အမြန်နှုန်းမှာမတတ်နိုင်သောကြောင့်သို့သော်, Jet Propulsion ၏ဤအသုံးပြုမှုမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့တစ်ဦးတည်းအချိန်တန့်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ 1600 နှင့်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အကြားများစွာသောသိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာလေယာဉ်မောင်းနှင်ရန်ဟိုက်ဘရစ်အင်ဂျင်နှင့်အတူစမ်းသပ်ပေမယ့်သူတို့ကိုအဘယ်သူအားမျှဆာဖရန့် Whittle နှင့် Dr. Hans ဗွန် Ohain ၏နောက်ပိုင်းတွင်တီထွင်မှုနီးစပ်တယ်။ အဲဒီအစား, များစွာသော Air-အအေးနှင့်အရည်-အအေး inline နှင့် rotary နှင့်ငြိမ် radial အင်ဂျင်-အဖြစ်လေယာဉ်အဘို့ပါဝါအရင်းအမြစ်ဟာပစ္စတင်အင်ဂျင်ရဲ့-အပါအဝင်ပုံစံများကိုတစ်ဦးကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
ဆာဖရန့် Whittle ရဲ့ Turbojet Concept ကို
ဆာဖရန့် Whittle အလုပ်သင်အဖြစ်တော်ဝင်လေတပ်ပူးပေါင်းနောက်ပိုင်းတွင်သူပထမဦးဆုံးအနေနဲ့လေယာဉ်ပျံကိုစွမ်းအားတစ်ခုဓာတ်ငွေ့တာဘိုင်အင်ဂျင်သုံးစွဲဖို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာလူငယ်အရာရှိသာ 22 ခဲ့တဲ့ 1931 ခုနှစ်စမ်းသပ်လေယာဉ်မှူးဖွစျလာသူတစ်ဦးအင်္ဂလိပ်လေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာနှင့်လေယာဉ်မှူးဖြစ်ခဲ့သည်။ မကြာခဏခေတ်မီဂျက်တွန်းအားစနစ်များ၏ဖခင်အဖြစ်မှတ်နေစဉ်, Whittle သည်သူ၏အတွေးအခေါ်များ၏လေ့လာမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအရာရှိတဦးကထောက်ခံမှုရရှိရန်မအောင်မြင်ကြိုးစားခဲ့နှင့်သူ၏ကိုယ်ပိုင်ပဏာမခြေလှမ်းအပေါ်သူ၏သုတေသနကိုလိုက်ခဲ့ကြရသည်။ သူကဇန်နဝါရီလ 1930 ခုနှစ်တွင် turbojet တွန်းအားအပေါ်သူ၏ပထမဆုံးမူပိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့သည်။
ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုနှင့်အတူ Whittle single-ဇာတ်စင်တာဘိုင်မှ coupled single-ဇာတ်စင် centrifugal တွန်းခဲ့သောသူ၏ပထမဦးဆုံးအင်ဂျင်၏ 1935 ခုနှစ်တွင်ဆောက်လုပ်ရေးစတင်ခဲ့သည်။ ဤသည်သာတစ်ဦးဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်တူးစင်ဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်ပေမယ့်က၏ဖြစ်နိုင်ခြေသရုပ်ပြတဲ့အခါမှာဧပြီ 1937 အတွက်အောင်မြင်စွာခုံတန်းလျား-စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ပါတယ် turbojet အယူအဆ။
Whittle သေးငယ်တဲ့စမ်းသပ်လေယာဉ်တစ်စင်းအားရည်ရွယ်ဇူလိုင်လ 7, 1939 ရက်တွင် W1 အဖြစ်လူသိများနေတဲ့ Whittle အင်ဂျင်များအတွက်စာချုပ်လက်ခံရရှိထားတဲ့ကုမ္ပဏီပါဝါဂျက်လေယာဉ်များ, Ltd. , နဲ့ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ 1940 ခုနှစ်, Gloster လေယာဉ်ကုမ္ပဏီရှေ့ဆောင်, အ W1 အင်ဂျင်ပါဝါမယ်လို့လေယာဉ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ရှေးခယျြခဲ့; အဆိုပါ သမိုင်းဝင်ပထမဆုံးလေယာဉ် ရှေ့ဆောင်၏မေလ 15, 1941 ရက်နေ့ရာအရပျကိုယူ။
အများအပြားဗြိတိန်နှင့်အမေရိကန်လေယာဉ်တင်ယနေ့အသုံးပြုသောအဆိုပါခေတ်မီ turbojet အင်ဂျင် Whittle တီထွင်သောရှေ့ပြေးပုံစံပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ဒေါက်တာပညာရှင် Hans ဗွန် Ohain ရဲ့အဆက်မပြတ် Cycle လောင်ကျွမ်းခြင်း Concept ကို
ပညာရှင် Hans ဗွန် Ohain ဂျာမနီမှာGöttingenတက္ကသိုလ်မှရူပဗေဒ၌သူ၏ဒေါက်တာဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီးတော့ဟူဂို Von Pohl, တက္ကသိုလ်မှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Institute ၏ညွှန်ကြားရေးမှူးဖို့အငယ်တန်းလက်ထောက်ဖြစ်လာပြီးသူတစ်ဂျာမန်လေယာဉ်ပျံဒီဇိုင်နာဖြစ်ခဲ့သည်။ အဲဒီမှာနေစဉ်, ဂျာမန်လေယာဉ်တစ်စင်းဆောက် Ernst Heinkel သစ်ကိုလေယာဉ်ပျံတွန်းအားဒီဇိုင်းများအတွက်အကူအညီအတွက်တက္ကသိုလ်တောင်းနှင့် Pohl ဗွန် Ohain အကြံပြုခဲ့သည်။
ထိုအချိန်တွင်ဗွန် Ohain ခံခဲ့ရ လေယာဉ်သစ်တစ်ခု type ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေး နေတဲ့ပန်ကာမလိုအပ်ခဲ့ဘူးကြောင်းအင်ဂျင်ကို။ သာ 22 နှစ်ရှိသူပထမဦးဆုံး 1933 အတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်သံသရာလောင်ကျွမ်းခြင်းအင်ဂျင်၏စိတ်ကူးသည်ပဋိသန္ဓေအခါ, ဗွန် Ohain ဆာ Whittle ၏ရန်အယူအဆအလားတူဒါပေမဲ့ပြည်တွင်းရေးအစီအစဉျတှငျကွဲပြားခြားနားကြောင်းကို 1934 ခုနှစ်တွင်တစ်ဦး Jet Propulsion အင်ဂျင်ဒီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့်။
von Ohain 1936 ခုနှစ် Ernst Heinkel ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးနှင့်သူ၏ဂျက်လေတွန်းအားအယူအဆ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူဆက်လက်။ သူကအောင်မြင်စွာခုံတန်းလျား-စမ်းသပ်ပြီးစက်တင်ဘာလ 1937 ၌သူ၏အင်ဂျင်များအနက်နှင့်သေးငယ်တဲ့လေယာဉ်ပျံပေါ်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပျံသန်းသော Heinkel He178 အဖြစ်လူသိများတွန်းအားစနစ်၏အသစ်တစ်ခုအမျိုးအစားတစ်ခု testbed, အဖြစ်အစေခံရန် Ernst Heinkel ကဒီဇိုင်းနှင့်ဆောက်လုပ်ခဲ့သည် သြဂုတ်လ 27, 1939 ။
von Ohain ပထမဦးဆုံးဧပြီလ 2, 1941 ရက်တွင်ပျံသန်းသောသူ S.8A အဖြစ်လူသိများနေတဲ့စက္ကန့်တိုးတက်လာသောဂျက်အင်ဂျင်တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
Anton ဗန် Leeuwenhoek က - ထိုဏု၏ခမညျးတျော
အဆိုပါဘီးနှင့်အခြား timeless ဂန္တဝင် Re-တီထွင်
အလက်ဇန်းဒါးဂရေဟမ်ဘဲလ် - ပထမဦးစွာတယ်လီဖုန်းမူပိုင်ခွင့်
သံလိုက် Levitated ရထား (Maglev) ၏အခြေခံ
က MP3 များ၏သမိုင်း
အနုမြူ Volume ကိုအဓိပ္ပာယ်
ဘယ်လို Tyrannosaurus Rex ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သလော
ခရစ္စမတ်သီချင်း Chord နှင့် Lyrics
မျက်နှာပြင် Interval (SI) နှင့် Scuba ရေငုပ်
အနက်ရောင်, အနီရောင်နှင့်ရွှေ: ဂျာမန်အမျိုးသားအလံ၏ ​​Origins
Montana ပြည်နယ်တက္ကသိုလ် - မွောကျပိုငျးအဆင့်လက်ခံရေး
တစ်ဦးက $ AP ကျောက်အတ္ထုပ္ပတ္တိ
မီတာမှ micrometer converting
ဗိုက်ကင်းဆိုဒ်များ - ရှေးဟောငျးအီ Norse ၏ရှေးဟောင်းသုတေသနပျက်စီးခြင်း
ဘယ်လို TNT ပေါ့ပ်၎င်း၏ Snappers လုပ်ငန်း
ထာဝရမေတ္တာကို Quotes ၏ timeless အလှအပတို့က Mesmerized Get
အော့တို Titzling နှင့် Brassiere
"ဒါဟာ" Grammar အတွက် Dummy အကြောင်းအရာအဖြစ်